प्रविधि/समाचार/२०१९/३२ - Meta
प्रविधि समाचारले सम्पूर्ण सफ्टवेयर परिवर्तनहरू जसले तपाईँ र तपाईँजस्ता सहकर्मी विकिमिडियनहरूलाई पार्ने प्रभावहरूमाथि नजर राख्न सघाउन सारांश हरेक हप्ता पस्किन्छौँ। सदस्यता लिनुहोस्, योगदान दिनुहोस् र सुझाव दिनुहोस्।
previous 2019, week 32 (Monday 05 August 2019) next
पछिल्लो प्रविधि समाचार विकिमिडिया प्राविधिक समूदायबाट । यी परिवर्तनहरू बारेमा अरु प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भन्नुहोस् । हरेक परिवर्तनहरूले तपाईँलाई प्रभाव पार्दैन । अनुवादहरू उपलब्ध छन् ।
यो हप्ताका परिवर्तनहरू
६ अगस्ट देखि मेडियाविकीको नयाँ संस्करण MediaWiki।org र परीक्षण विकीमा उपलब्ध हुनेछन् . यो केही गैह्र विकिपिडिया विकीहरूमा ७ अगस्ट देखि लागू हुनेछ । यो सबै विकीहरूमा ८ अगस्ट (calendar) देखि लागू हुनेछ ।
अचानक RelatedArticles extension मा सबैका लागि सक्रिय पारिएको छ, तर मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि भने गरिएको छैन। यसलाई समाधान गरिसकियो। 
तपाईँ IRC मा प्राविधि सल्लाहकार वैठकमा आहुनहरू। बैठकमा स्वयंसेवी विकासकर्ताहरूले सल्लाह माग्न सक्नेछन् । बैठक ७ अगस्ट at 15:00 (UTC) मा हुनेछ । कसरी सहभागीहुने हेर्नुहोस् ।
अहिले सबैजनाले प्रवेश नगरी गरिएका सम्पादनमा आइपी ठेगाना देखिन्छ। भविष्यमा यो अझ बढी लुकाइने छ। यो दर्ता नगरिएका प्रयोगकर्ताहरूलाई जोगाउनको लागि हो त्यसैले थोरै प्रयोगकर्ताहरूले मात्र आइपी देख्नु हुनेछ। यो हुल्याहापन नियन्त्रण गर्ने औजारहरू प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा निश्चित गरेपछि मात्र हुने छ। तपाईँले पढ्न र टिप्पणीहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
प्राविधिक दूतहरूद्वारा तयार पारिएको र बोटद्वारा पोष्ट गरिएको प्रविधि समाचार • योगदान गर्नुहोस् • अनुवाद गर्नुहोस् • सहायता प्राप्त गर्नुहोस् • सुझाव दिनुहोस् • ग्राह्य या अग्राह्य गर्नुहोस्.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Tech/News/2019/32/ne&oldid=19269127"
This page was last edited on7August 2019, at 01:04.